Budada CDP Choline: Faallooyinka & Faa'iidooyinka & Waxyeelada Ay Leedahay | AASraw
CDP Choline Powder: Faallooyinka & Faa'iidooyinka & Waxyeellooyinka - Nootropics Saafi ah
/blog/CDP Choline/CDP Choline Powder: Faallooyinka & Faa'iidooyinka & Waxyeellooyinka - Nootropics Saafi ah
Posted on 05 / 05 / 2018 by 阿斯劳 ku qoray CDP Choline.
Wax kasta oo ku saabsan budada Pramiracetam
1.CDP choline Baaritaanada budada
2.CDP choline Powder – CAS: 987-78-0
3. Sidee buu u shaqeeyaa PPP oo loo yaqaan 'Powder Works'
4.CDP choline Powder (987-78-0) –Habka Ficilka
5.Typical CDP Choline Hawo Qaadasho
6.CDP Choline Faa'iidooyinka iyo Saameynta
7. Barnaamijka CDP ee Seeraha Faa'iidooyinka Faa'iidooyinka VS Alpha GPC
8. Waxyeelada daawada loo yaqaan Pandemic CDP
9. Macluumaad Dheeraad ah oo ku saabsan CDP choline Powder
10.CDP Choline Suugaanta Nooca
11.How si aad u iibsatid Poop Powder Online
12.Question Iskudhicii CDP ee budada
1. Dib-u-eegista budada ee CDP
Budada CDP choline waa a unugotus taasi waxay asal ahaan u tahay daawo labadaba choline iyo uridine, oo labadaba mootoolojiyaddan loo siinayo jirka ka dib markii afka la cuno budada cayriin ee CDP. Gaar ahaan, budada loo yaqaan 'CDP choline budada' waxay u kala baxaan choline iyo cytidine, iyada oo cytidine markaa loo beddelayo uridine. Budada ceeriin ee CDP choline waa mid ka mid ah saddexda choline ee ay ku jiraan fosfolipids-ka oo afka lagu kabi karo (labada kale waa Alpha-GPC iyo phosphatidylcholine).
Caawinaadkan waxaa loo adeegsadaa si looga hortago ama loo daweeyo dhibaatooyinka xasaasiga ah ee la xiriira waayeelka sababtoo ah xaqiiqda ah in labadaba ay labadiinaba qirayaan in ay yihiin kuwo neerfotin ah oo laga yaabo inay kor u qaadaan barashada. Inkasta oo ay u muuqato in ay ka waxtar badan tahay fosfatidylcholine (PC) doorkaa, qayb ahaan sababo sii kordhaya PC kombiyuutarka maskaxda, awooddiisu waxay u eg tahay mid la mid ah tan Alpha-GPC.
Budada cayriin ee CDP choline waxay leedahay adeegyo kale oo suurtagal ah oo la xidhiidha garashada. Waxaa badanaa loo adeegsadaa sidii loo xoojin lahaa xusuusta dhalinyarada, laakiin in kasta oo daraasado jireed qaarkood ay soo jeedinayaan in tani ay macquul tahay afka CDP choline budada, ma jiraan daraasado bini aadam oo dhalinyarada xilligan la joogo. Hal daraasad ayaa xustay kororka feejignaanta leh qiyaasta yar ee budada ah ee loo yaqaan 'CDP choline powder' (oo loo baahan yahay in la soo koobo), iyo CDP choline budada cayriin ayaa laga yaabaa inay yeelato doorka ka hortagga balwadaha ee ka hortagga kookeynta iyo (caddaynta hordhaca ah waxay soo jeedinaysaa) cuntada sidoo kale.
2. CDP choline budada-CAS: 987-78-0
magaca Daawada budada ee CDP
Magaca kale Daawada budada ee CDP, Seinkaine-diphosphate choline
Formula kelli C14H26N4O11P2
Miisaanka kelli 488.32
saxid kaydinta qaboojiyaha
3. Sidee ayuu Daawada budada ee CDP Shaqeynayaa?
Daawooyinka Nafaqada ee CDP waa nafsiyan nafsiyan ah oo ka shaqeeya siyaabo badan: waxay dib u soo celisaa oo dayactirtaa xuubabka neuronal, waxay kordhisaa heerarka dopamine ee habka dhexe ee neerfayaasha, waxayna kordhisaa soo saarida neurotransmitter acetylcholine. Farsamooyinka ficil-hawleedka ayaa si baaxadleh loo daraaseeyay, oo ka duwan kuwa kuwa diirran oo badan, CDP-yada iyo hawlaha budhcad-badeedka ee khudradda ayaa si fiican loo fahmay.
Marka la nuugo CDP qoyaanka caanaha qoyan waxay u kala baxaan kolesteroolka iyo cidiinka iyo kala-baxyada jirka oo dhan, iyagoo ka gudbaya xuddunta dhiigga-maskaxda waxayna galaan habka dhexe ee neerfaha. Cudiyeynta waxaa loo beddelaa kaadida, saldhig nucleotide ah oo muhiim u ah xajinta neerfaha, waxaana la aaminsan yahay in la xoojiyo garashada. Xayeysiinta la sii daayay waxay u dhaqantaa sida cholinergic, kordhinta heerarka kaluun ee maskaxda. La socoshada Racetam Heerka Nørre Nørre Nørre Nørkørkrører liinjirin-qoyaanku wuxuu u dhigayaa midka ugu fiican ee jilicam nootropics, kaas oo si culus u soo qaada qoyskooda maskaxda- xoojinta shaqooyinka.
Choline waa horey u-qaadaha neurotransmitter acetylcholine, taas oo gebi ahaanba muhiim u ah dhinacyo badan oo ka mid ah hawlaha garashada, gaar ahaan barashada iyo xusuusta. Racetam class nootropics sida piracetam ayaa loo tixgeliyaa agagaarka acetylcholine, xeryahooda kor u qaada wax soo saarka iyo sii daaya acetylcholine iyagoo kicinaya goobaha qaabilsan ee neurotransmitter.
Marka qoyaan ku filan, waxaa sii kordhaya wax soo saarka iyo sii deynta asetylchololinta oo abuuraya isfaham aad u fara badan, oo ka mid ah xusuusta ugu fiican si loo helo diirada u fiican, fekerka nadiifka ah, soo celinta si dhakhso ah, iyo xitaa xoojinta dareenka. Laakiin marka qalabka milicsiga ee maskaxdu aysan ku filnayn saameynta fursadaha cunsuriga ah ayaa si aad ah hoos u dhacaya. Waxaa intaa sii dheer, madax-xanuunka yar-yar ee dhibka leh ee marmar la xiriira isticmaalka cunsuriga ayaa badiyaa loo aaneyn karaa qoyaan ku filan.
Sababahan awgeed, isticmaalayaal badan oo nootropic ah waxay tixgeliyaan budada sibidhka ee CDP marka la isu geeyo xargaha oo ay ku jiraan cunsuriyada. Mid waliba waa kobcin maskaxeed oo awood leh, laakiin wadajir ahaanba way ka xoog badanyihiin labada midba mid baa iska leh.
4. Daawada budada ee CDP Budada (987-78-0) -Habka Waxqabadka
Soo iibso budada qashinka ee CDP bulk intee buu sida caadiga ah u shaqeeyaa bacriminta budada ee CDP marka uu gaaro maskaxda?
Maaddaama dheeri-galku uu soo galayo dhiigga oo uu jirku ku dheehan yahay, waxaa loo kala jebiyey budada cayriin ee CDP choline iyo Cytidine Diphosphate. Budada CDP choline muddo dheer ayaa loo arkaa inay tahay mid ka mid ah nafaqooyinka ugu muhiimsan caafimaadka maskaxda iyo hagaajinta awooda maskaxda. Budada ceeriin ee CDP choline waxaa isticmaala unugyada maskaxda ee soo saarista Acetylcholine oo ah neurotransmitter si dhow ugu xiran baaxadda synaptic. Adoo kordhinaya waxqabadka Cholinergic, budada CDP choline waxay kor u qaadi kartaa sameynta xusuusta, kartida barashada, diirada, feejignaanta, iyo xitaa sababaha wanaagsan iyo xalinta dhibaatada.
Budada cayriin ee CDP choline waxaa badanaa lagu qaataa xayndaab Nootropic ah oo leh Piracetam, Aniracetam ama Noopept maxaa yeelay kaabayaashaan waxaa loo yaqaanaa inay is buuxiyaan isla markaana u horseedaan xitaa heerar sare oo ah waxqabadka acetylcholine ee nuuroonadaada. Maadadani waxay ku lug leedahay dhismaha iyo hagaajinta unugyada maskaxda, oo ay ku jiraan neerfahaaga.
Xaqiiqdii, tani asal ahaan waa walxo isku mid ah oo ka kooban xuubka unugyada inta badan maskaxda iyo unugyada neerfaha. Waxay u taagan tahay sida ugu badan boqolkiiba 30 dhammaan unugyada cawlan ee maskaxda ku jira. Maaddaama aan gaboobayo, qayb ka mid ah sababta xusuusta iyo shaqada garashada ay hoos ugu dhacayso waxaa ugu wacan unugyadaas iyo xuubabka oo si fudud u daallan. Budada CDP choline waxay awood u leedahay inay hagaajiso unugyadan, iyaga oo ka caawinaya inay si hufan u shaqeeyaan oo ay si fiican ula xiriiraan midba midka kale.
Dheeraadkani wuxuu kaloo caawiyaa kordhinta socodka dhiigga ee maskaxda. Qaadashada oksijiinta iyo gulukooska iyo dheef-shiid kiimikaadka maskaxda ayaa la hagaajiyay. Marar badan saameyntani waxay keenaan heer aad u sarreeya oo tamar maskaxeed ah. Dadka badankood waxay sidoo kale u badan tahay inay dareemaan awood horumarineed oo diirad saarid iyo feejignaan, iyadoo qaarkoodna ay xitaa ogaadeen inay leeyihiin feejignaan dheeri ah. Baarayaasha qaarkood xitaa way fiirinayaan adoo isticmaalaya budada qallalan ee CDP carruurta iyo dadka waaweyn ee leh ADHD iyo ADD.
Haddii aad runtii rabto inaad sare u qaaddo feejignaantaada iyo heerarka dhiirigelinta, waxaa ugu wanaagsan in la isku daro budada CDP choline budada cayriin leh nootropics kale sida Noopept iyo Pramiracetam, laakiin kaabiskan wuxuu yeelan karaa saameyn xoog leh kaligiis sidoo kale. Cilmi baaris ku saabsan budada loo yaqaan 'CDP choline budada' ayaa rajo ka qabtey illaa iyo hadda, hase yeeshe cilmi baaris dheeraad ah ayaa wali loo baahan yahay. Waqtigaan budada CDP choline waxaa laga heli karaa gudaha USA iyada oo ah kaabis caafimaad oo keliya, FDA-na ma aysan ansixin CDP choline budada cayriin ee daroogada ah si looga hortago ama loo daweeyo xaalad kasta.
5. Daawada budada ah ee CDP Powder qiyaasta
Qalabka daawada loo yaqaan 'CDP' oo sax ah ayaa ku xiran waxyaabo badan oo kala duwan oo ay ku jiraan da'da, miisaanka, jinsiga, physiology, iyo dareenka shakhsi ahaaneed. Sidaa darted, budhcad badeedka CDP waxaad isticmaali kartaa maalin waliba waxay ku xiran tahay sababaha aad ugu qaadan lahayd meesha ugu horeysa .Taliyaha hoos ku xusan waa qawaaniinta guud oo keliya, qiyaastaada shakhsi ahaaneed way ka duwanaan kartaa. Had iyo jeer waxaa lagula talinayaa inaad la hadasho dhakhtarkaaga si aad u go'aamiso qiyaasta ugu fiican ee baahidaada.
Tusaale ahaan, haddii aad raadinayso inaad heshid faa'iidooyinka garashada ee kor ku xusan, ka dibna dadka badankoodu waxay ku taliyeen in ay joogaan meel 500 ah 1,000 mg xaddiga qiyaasta maalin kasta. Dib-u-eegista iyo qoraalka waayo-aragnimada isticmaalka ayaa laga yaabaa inay soo jeediyaan isticmaal badan, laakiin laguma talinayo in aad ku bilowdo qiyaas aad u sareysa. Waxyaabaha kale ee aad doonaysid inaad maskaxda ku hayso waa inaad iska ilaaliso inaad qaadato qiyaasta kiniiniga ee CDP-gaaga intaad fiidkii, sababtoo ah waxay u horseedi kartaa kordhin tamar oo keeni karta in hurdo la hurdo.
Xaaladaha qaarkood, waxaa laga yaabaa in ay faa'iido u leedahay qaadashada qiyaasta weyn haddii aad ka cabaneyso arrin caafimaad oo uu takhtarku kugula taliyay budada qashinka CDP. Wali wali way dhif u tahay dhakhaatiirta Waqooyiga Ameerika inay soo qoraan gunnadaas, laakiin waxay ku badan tahay Yurub Daawada budada ee CDP waxaa loo istcimaalaa dadka ka badbaaday haragga iyo dadka waayeelka ah oo leh xasuusin la'aan. Haddii xaaladdu sidan kugu habboon tahay, waa inaad la tashataa takhtarka kahor intaadan qaadan kaalmada buotropic.
6. Daawada budada ee CDP Bwaxbadan iyo Saameynta
Budada loo yaqaan 'CDP choline powder' waa mid dhexdhexaad ah oo laga sameeyo samaynta fosfoofiyad xuub ku wareegsan unug kasta iyo samaynta kiimikada muhiimka ah ee loo yaqaan 'acetylcholine', ee laga helo maskaxda iyo jidhka. Nafaqadan waxaa laga ansixiyay Yurub iyo Japan si loogu isticmaalo istaroogga, cudurka Parkinson iyo xanuunada kale ee neerfaha waxaana lagu iibiyaa magaca Citicoline. Si ahaan, waxaad u tixgelin kartaa inay tahay qaab xoog badan oo choline ah. Daraasaduhu waxay muujinayaan in budada cayriin ee CDP choline ay ka caawiso samaynta fosfatidylcholine xuubka maskaxda aadanaha; waxay kordhisaa isku-darka acetylcholine; waxay hagaajinaysaa waxqabadka maskaxda ee bukaanka qaba cudurka Alzheimers; iyo xitaa waxay hagaajineysaa xusuusta bukaanka waayeelka ah ee xusuusta ka maqan. Daraasad laga sameeyay Beljimka ayaa muujisay in maamulka eyda ay wanaajineyso awooddooda wax barasho iyo xusuus.
Deeqdani weli lama yaqaan laakiin waa inay ahaato tan ay bixiso faa'iidooyin badan oo garashada. Waxaad ka iibsan kartaa kaniiniyada khudradda ah ee CDP ama kiniinada isku dhafan oo bixiya dhowr kobcin oo muhiim ah oo maskaxeed.
1) budada cambe ee CDP Heerarku waxay joojin doonaan waxyeelada beerka
Budada CDP choline ayaa loo baahan yahay si loo sameeyo Phosphatidylcholine. Phosphatidylcholine waxay muhiim u tahay kala goynta dufanka ku dhaca beerka.Sidaa darteed heerarka budada ah ee loo yaqaan 'cholesterol cholesterol' waxay u horseedi kartaa lipid isku ururinta beerka. iyo dhibaatooyinka kale ee beerka Saameyntan ayaa dib loo rogay markii CDP choline budada badan lagu soo rogay cuntada. Waxyeellada dabka ee ay keento CDP choline budada yar ayaa laga yaabaa inay keento buurnida, dhiig karka, ama caabbinta insulin.
2) Dufanka qaxwada ee CDP May May Yar Yar
Daawada budada ah ee CDP ayaa muujisay in ay hoos u dhigto heerarka waxyeellada bararka ee jirka. Agonism-ka qaar ka mid ah receptors acetylcholine waa si toos ah anti-bararka. Daawad budada ah ee PDDP waxay kordhin kartaa astaamaha cudurrada inflammatory sida Asthma.
3) Daawada budada ee CDP waxaa loo baahan yahay si loo dhiso Myelin oo kordhiya Maqalka
Choline waa nafaqo muhiim u ah myelin, taas oo muhiim u ah sirdoonka iyo IQ.In lagu daro noocyada xayawaanka ee sclerosis, CDP qoyaan caano ah oo saameyn ku leh faa'iidooyinka waxtarka leh ee maareyn, oligodendrocytes iyo fiilooyinka. Daawada budada ee CDP si wax ku ool ah loo kobciyay maareynta maareynta iyo dib u celinta macaamilada isku-xirka gawaarida. Remyelination xoojiyay korodhka ka soo korodhay tirada sii kordhaysa oligodendrocytes iyo unugyada oligodendrocyte horizontal.
4) budada qallalan ee CDP Kaalmeyn karaan Hagaajinta Waxqabadka garashada
Acetylcholine waa maaddo muhiim u ah nidaamka neerfaha, iyadoo aysan jirin acetylcholine, nidaamka neerfaha ma gudbin karo macluumaadka jirka gudihiisa. Hoos u dhaca garashada badanaa wuxuu dhacaa, qeyb ahaan, sababtoo ah yaraanta acetylcholine. Daraasad kale ayaa muujisay in maadada CDP choline ay kor u qaadi karto xusuusta.Daraasad kale ayaa muujisay in budada CDP choline ay gacan ka geysan karto hagaajinta maadooyinka dareenka. .
5) Daawada budada ee CDP waxay kaa caawin kartaa hagaajinta calaamadaha cudurka Alzheimers iyo Parkinson's disease
Tijaabooyinku waxay muujiyeen in qaadashada qaadashada budada 'CDP choline' ay kordhisay astaamaha bukaanada qaba cudurka khafiifka ah ee Alzheimer. yareeya astaamahan.
6) Heerarka Foornada Dheeraadka ah ee CDP ee CDP ayaa kordhin kara Khatarta Kansarka
Heerarka sare ee 'Homocysteine' waa astaamaha la ogsoon yahay ee kansarka. Iyadoo aan lahayn budada cayriin ee 'CDP choline' ee loo baahan yahay si loo jajabiyo Homocysteine, halista ah inuu ku dhaco kansarku aragti ahaan wuu sii kici karaa. kansarka qanjirka 'prostate'. CDP choline budada cayriin waxay si aad ah ugu urursan tahay unugyada kansarka qanjirka 'prostate', iyo uruurinta dhiigga ee budada 'CDP choline budada' ayaa lala xiriiriyay halista sii kordheysa ee kansarka qanjirka 'prostate'. Daraasadda ayaa sidoo kale muujisay in is-beddelka hidde-wadaha ee burburiya CDP choline budada cayriin ay kordhin karto halista kansarka naasaha.Badka hoose: CDP choline budada waa nafaqo muhiim u ah ka hortagga kansarka naasaha.
7) Daawada budada ah ee CDP waxay caawineysaa Schizophrenia, Bipolar iyo Autism
Cudurka 'Schizophrenia' iyo 'Autism' waxaa sababi kara yaraanta birta hooyada inta lagu jiro xilliga uurka. saadaalinta ayaa sidoo kale laga hortagi karaa ka hor CDP choline choline supplements budada cayriin. Daraasad lagu sameeyay maadooyinka Schizophrenia, maadooyinka qaadashada budada budada ee CDP waxay muujinaysaa garashada iyo xasuusta hirgelinta ka dib daaweynta. Daraasado dhowr ah ayaa muujiyay in budada dufan ee CDP ay ka caawin karto daaweynta cudurka laba-cirifoodka waxaana laga yaabaa inay noqoto mid waxtar leh daaweynta daawooyinka.
8) Daawada budada ah ee CDP waxaa laga yaabaa in la hagaajiyo dib u soo kabashada dadka dhaawaca ka soo gaaray maskaxda
Soo kabashada dhaawaca maskaxda waxay noqon kartaa qalab dherer iyo xitaa dilaac. Kiniiniga qaxwada ee CDP ayaa la muujiyey si uu u caawiyo maskaxda ka soo kabashada dhaawacyada maskaxda.
9) Heerarka Sare ee Dheeraadka Dheeraadka ah ee CDP wuxuu caawiyaa Kordhinta Waxqabadka Dhibcaha
Daraasad ayaa muujisay in heerarka sare ee Alpha GPC, oo ah isha laga helo CDP choline budada cayriin, ay gacan ka gaysatay hagaajinta culeyska. Kor u qaadista iyo waxqabadka cayaaraha.
10) Heerarka Sare ee Dheecaanka Dheecaan ee CDP May May Yaree Rabitaanka
Heerarka dabiiciga ah ee loo yaqaan "PDP choline" ee 2000mg / maalin ayaa lagu muujiyey inay hoos u dhigto maadada cuntada.
11) Dheecaan budada ah oo CDP ah Ka caawi Daaweynta Mukhaadaraadka Daroogada
Caddeynta qaar ayaa muujisay in budada cagaaran ee CDP ay gacan ka geysan karto yareynta khamriga daroogada sida kookaynta.
12) Daawada budada ah ee CDP waa Muhiim ah Horumarinta uurjiifka
Budada CDP choline waa mid aad muhiim ugu ah koritaanka uurjiifka Haweenka badan ee uurka leh ma isticmaalaan CDP choline choline budo cayriin ah sanadaha ugu horeeya inta ay hooyadu nuujinayso, waxaa muhiim ah in hooyadu isticmaasho xaddi badan oo ah budada CDP choline. Budada CDP choline waxay muhiim u tahay dhismaha nidaamka neerfaha, waxay sare uqaadeysaa kala qeybinta unugyada iyo balaarinta unugyada Sida horudhaca lagama maarmaanka u ah acetylcholine, budada cayriin ee CDP choline waxay muhiim u tahay horumarinta maskaxda uurjiifka. uurka waxaana lagu gartaa "cilladaha jirka, cilladaha neerfaha horumarintiisa, iyo cilladaha neerfaha, oo ay ku jiraan caqliga, fulinta, iyo xusuusta oo yaraada" .Daraasado ayaa muujiyay in budada CDP choline ay gacan ka geysan karto yareynta astaamaha cudurada noocaas ah.
13) budada cambareynta ee CDP waa Muhiim u tahay Go'aaminta Hoosada Nafaqada ee Horumarka
Muujinta hiddo-wadaha waa qayb muhiim ah oo lagu go'aaminayo astaamaha shaqsiga. Hiddo-wadeyaasha jirka qaarkood waa la dami karaa halka kuwa kalena la daarayo. Qaybaha ugu badan ee muujinta hidda-wadaha waxaa la go'aamiyaa inta lagu jiro horumarka uur-kujirka. Betaine, CDP choline choline metabolite, ayaa muhiim u ah bixinta enzymes methyl leh kooxaha methyl. Iyadoo aan laga helin ilaha kooxaha methyl, methylation ma dhici karto oo muujinta hidda-wadaha lama beddeli karo.
14) Heerarka Foornada Cabbiraadka ee CDP-yada oo yar ayaa ka hortagi kara dheef-shiid kiimikaadka saxda ah ee ku jira dhudhunka
Phosphatidylcholine waxay lagama maarmaan u tahay dheef-shiid kiimikaadka ee ku jira mindhicirka. Sababtoo ah budada cambuurka ee loo yaqaan CDP ayaa loo baahan yahay si loo sameeyo phosphatidylcholine, heerka hoos udhaca budada ee CDP waxay xadeyn kartaa wax soo saarka. Daraasad lagu sameeyo jiirka nuujinta ayaa muujinaya in heerarka sare ee unugyada CDP loo yaqaan 'papin' lipids ee mindhicirka. Waxaa sidoo kale la muujiyey in heerka hoos udhaca baraha ee CDP loo horseedayo hoos u dhaca aagga dareenka maqaarka ee nuugista.
15) Daawada budada ah ee CDP waxay caawineysaa hagaajinta calaamadaha Glaucoma
Glaucoma waa cudur uu keeno cadaadiska ka danbeeya dareemaha indhaha. Cudurku wuxuu u horseedi karaa indho la'aan. Daraasaddu waxay muujisay in marka maadooyinka cudurka la siiyo budada cambuurka ee CDP, calaamadaha Glaucoma ayaa si aad ah u fiicnaaday. Tani waxay soo jeedinaysaa in daaweynta leh budada caanaha ah ee CDP ay tahay mid u dhiganta daaweynta kale ee Glaucoma.
Ma jiro qof aan ka faa'iideysan karin koritaanka maskaxda, caddayn maskaxeed, iyo hindisaha xoojinta dabeecadda ee la xidhiidha budada caanaha ah ee CDP. Caawinta dheeraadka ah ee la baaray waxay amaan u tahay dhamaan noocyada kala duwan ee isticmaaleyaasha, waxaana leh dhowr saameyn oo la xaqiijiyay Waa inaad dareentaa isla markiiba markaad qaadato kaalmada dheeraadka ah. Kuwa isticmaala maskaxda caafimaadka leh iyo xitaa kuwa qaba naafonimada garashada sida kuwa ka badbaaday stroke iyo dadka qaba Alzheimers ayaa si ammaan ah u isticmaali kara budada dufanka CDP si ay u aragto hagaajinta xajinta iyo niyadda.
7. Daawooyinka budada ah ee CDP VS Alpha GPC Waxtarrada
Jidhku wuxuu ku shubayaa budada lagu shubo budada CDP, kaas oo markaa la jabiyo fosfatidylcholine. Phosphatidylcholine waa bakhaarada qolka qaxwada ee jirka. Waxay ka caawin kartaa labadaba abuurka unugyada unugyada, laakiin sidoo kale wuxuu abuuraa acetylcholine marka loo baahdo.
Alpha GPC wuxuu ku yaalaa dhammaadka soo socota ee geeddi-socodka laga soo qaato budada choline-ka ee CDP. Alpha GPC waa xayiraad fosfatidylcholine halkii aad horey u lahayd. Asal ahaan, waxa tani macnaheedu waa in geeddi-socodka shuban-biyoodka, budada cagaarka ee CDP waxay ku dhowdahay ilo asal ah asalka ah Alpha GPC waxay u dhowdahay qaabka loo isticmaalo unugyada.
Taasi waa su'aal adag oo la xidhiidha doodda. Waxaa jira laba baadhitaan oo toos ah oo isbarbardhigaya labadaba markii la isku duro oo loo yaqaan intramuscularly. Daraasaddii ugu horreysay, Alpha GPC waxay u muuqatay in ay kordhiso howlaha garashada ee ka badan kan CDP ee qoyaanka cagaaran iyo tan labaad, Alpha GPC waxay keentay heerarka sare ee plasma. In kasta oo Alpha GPC u muuqato inay tahay cadaan cad, waxaa la soo jeediyay in habka qaadashada uu saameyn ku yeelan karo iyo sidoo kale in heerarka plazma ay muujin karaan kor u kaca badan ee budada sibidhka ee CDP.
Marka aan la barbar dhigin madax madaxa, labadaba Alpha GPC iyo CDP qashinka cagaarka ah ayaa loo xaqiijiyay in ay noqdaan mid firfircoon. Marka la eego isku dhejinta dheeriga ah ee dheeraadka ah, habka ugu fiican ee ficilku waa in si fudud loo tijaabiyo. Waxaad bilaabi kartaa labada mid isbuucyo ah, ka dibna beddel. Haddii mid ka mid ah uu ka fiicnaaday kii kale ee adiga kugu sameeyay, waxaad heshay guuleyste! Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa si joogta ah si loo hubiyo in dhammaan geeddi-socodka la daboolay.
Marka ay timaado nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah, kolkaa waa muraayad si loo ilaaliyo maskaxda iyo jidhka. Choline wuxuu door muhiim ah ka qaataa soo saarista unugyada unugyada, taas oo markaa ay nafaqo u leedahay nafahooda.
Maskaxda gudaheeda, buunshuhu waa horey loogu talagalay acetylcholine, neurotransmitter oo gacan ka geysanaya ilaalinta muruqyada xasaasiga ah ee saxda ah. Muhiimadda qiyaasta qumman ee saxda ahi waxay noqoneysaa mid muhiim u ah dadka da'da ah marka la isku daro acetylcholine ayaa hoos u dhacda, taas oo keenaysa xasuusta iyo garashada garashada si degdeg ah loo yareeyo.
Marxaladaha aadka u daran iyo kiisaska, saameynta da'da xusuusta waxaa loo isticmaalaa kaftan ama cudurdaar marka qof uu iloobo wax, laakiin xaaladaha daran, xasuusinta xusuusta waxay noqon kartaa mid aad u xun.
Choline waxaa kaliya oo loo nuugi karaa cuntada. Cuntooyinka qaarkood sida ukunta iyo hilibka ayaa ka sarreeya qoyaanka dadka kale, laakiin kuwani waa cuntooyin isku mid ah oo la daboolay oo si khaldan loogu eedeeyay inay sababeen cuduro kale oo badan. Natiijo ahaan, dad badan oo Maraykan ah ayaa ah kuwa ku filan, oo la qiimeeyo 10% ama ragga, haweenka, iyo caruurta yar yar ayaa la siinayaa qiyaasta maalin kasta ee lagu talinayo. Tani waxay si gaar ah u noqoneysaa mid dhibaato leh oo ay u keento vegetarians iyo vegans kuwaas oo aan u lahayn cuntooyinkan cuntadooda.
Marka jirku uu yaraado, jidhku wuxuu mudnaanta u leeyahay dhismaha unugyada unugyada, isagoo maskaxda ka shaqeynaya dabka qaboojiyaha. Intaa waxaa dheer in la cuno cuntooyinka qani ku ah qoyaanka, qadarinta dheellitirnaanta ayaa ah dariiqo adag oo lagu kordhin karo qadada, gaar ahaan kooxaha da'da. Laba daawo oo caan ah oo leh bioavailability sare waa budada qaxwada ee CDP iyo Alpha GPC. Inkasta oo ay farsamo ahaan kala duwan yihiin, labaduba waa kuwo taabogal ah tan iyo markii ay dhacaan marxalado kala duwan oo ku saabsan burburinta dheef-shiid kiimikaadka.
8. Waxyeelada daawada ee CDP ee budada ah
Dhibaatooyinka soo raaca ee budada ah ee 'CDP choline' Diiwaanka Daawooyinka Dabiiciga ah waxay ku qiimeeyeen CDP choline budada cayriin sida Suurtagalnimada Badbaadinta isticmaalka afka ah ee dadka waaweyn. Budada CDP choline guud ahaan si fiican ayaa loo dulqaataa markii lagu qaato qiyaasta ku habboon.
Inkasta oo saameynaha daaweyntu ay yaryihiin, waxaa jira waxyaabo dhawr ah oo sahlan oo la xidhiidha lifaaqan. Kuwani waxaa ka mid ah waxyeellooyinka sida madax xanuun, daal, dareen, lallabo, shuban, iyo arrimaha kale ee GI. Xaaladaha aad dhif u ah waxaa dhici karta inay keeni karto hoos u dhac ku yimaada cadaadiska dhiigga iyo / ama dawakhaad.
Mar labaad marar badan oo ka mid ah saameyntani waa kuwo aad dhif u ah. Kordhintaas waxay dhab ahaantii leedahay aalado sun ah oo ammaan ah oo waa in loo tixgeliyaa qof kasta oo ka baxsan hooyooyinka uurka leh iyo kuwa kalkaaliyaha ah (oo kaliya sababo la'aanta caddayn iyo baaritaan nabadgelyo).
Guud ahaan, budada cambareynta ee CDP waa mid ammaan ah oo waxtar leh, taas oo gacan ka geysan karta hagaajinta xasuusta, xoojinta, iyo feejignaanta, waxayna ku siin kartaa faa'iidooyin badan oo loogu talagalay dadka yaryar iyo kuwa da'da ahba.
9. Macluumaad Dheeraad ah Daawada budada ee CDP Powder
Daawada budada ah ee CDP, ama Citicoline, waa ilo choline ah oo la muujiyey inay gacan ka geysaneyso hagaajinta xasuusta iyo howlaha garashada ee adeegsadayaasheeda. Budada cayriin ee CDP choline ayaa loo soo jeediyay inay keento kororka cufnaanta dawada ee dawada loo yaqaan 'dopamine receptor', waana macquul in adeegsiga daaweynta ama gacan ka geysashada Dhibaatada Feejignaanta Feejignaanta.
Budada ceeriin ee CDP choline waa isha Acetylcholine iyo nootropic biyo-ku milma ee fasalka kiimikada Choline. Budada CDP choline waxaa loo isticmaalaa si loo caawiyo loona daaweeyo Alzheimers iyo kaabis Nootropic ah si looga caawiyo hagaajinta iyo kordhinta xusuusta iyo garashada.CDP choline budada cayriin ayaa la muujiyey inay ka hortageyso xumaanshaha neerfaha iyo yareynta tirada unugyada apoptotic-ka ee jira. Budada CDP choline sidoo kale waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta howlaha muuqaalka ee dadka qaba Glaucoma, iyo Amblyopia. Budada cayriin ee CDP choline waxaa loo yaqaanaa inay gacan ka geysato kordhinta dheef-shiid kiimikaadka maskaxda ku jira iyo sidoo kale socodka dhiigga maskaxda.
Hal daraasad, budada loo yaqaan 'CDP choline budada' ayaa la muujiyey si ay uga caawiso hoos u dhigista horumarka Alzheimer iyo sidoo kale inay noqon karto kaalmo macquul ah oo ku saabsan xoojinta iyo kordhinta xusuusta iyo awooda garashada. Daraasadani waxay sidoo kale muujisay in xaaladaha hypoxia iyo ischemia, budada CDP choline ay u shaqeysay sidii dheeri difaac kaabis ah iyo sidoo kale daaweyn wax ku ool ah oo ku saabsan cudurka Parkinson. Budada cayriin ee CDP choline: dib u eegista dawooyinka iyo daaweynta.
Budada cayriin ee 'CDP choline' oo ah mid si heer sare ah loo heli karo isla markaana leh faa'iidooyin suurtagal ah oo ku saabsan hagaajinta neuro-kororka iyo kordhinta heerarka acetylcholine ee nidaamka dhexe iyo durugsan, budada CDP choline ayaa loo isticmaalay daraasado badan oo dukumiinti ah oo loo adeegsaday caawinta dhowr xaaladood oo kala duwan Stroke, dhaawaca maskaxda, iyo Alzheimers. Waxaa la muujiyey inay saameyn wax ku ool ah ku leedahay xaalado badan oo ka mid ah xaaladaha la xiriira soo-kabashada neerfaha.
10. Daawada budada ee CDP Budada Shagaajinta
Noocyada dheellitirka budada ah ee CDP ayaa si sahlan loo heli karaa iibka alaabooyinka dheeraadka ah ee farsamooyinka, waxaana sidoo kale laga heli karaa qaar ka mid ah macaamiisha qaar sida Jarrow Formulas. Tixgelin a gunnada dheeraadka ah sida budada loo yaqaan 'CDP choline powder' waxay noqon kartaa fikrad fiican haddii aad dareento inaadan helin choline ku filan oo cuntada ah. Cunnooyinka sida hilibka, ukunta, kalluunka, iyo lowska dhammaantood waxay ku badan yihiin choline marka loo eego cuntooyinka kale, laakiin qaddar badan ayaa weli loo baahan yahay si loo daboolo qaadashada maalinlaha ah ee choline. Ukuntu waxay u badan tahay ikhtiyaarka ugu fiican ee loogu talagalay isku-dheellitirka dheellitirka marka loo eego aragtida cuntada. Markaad tixgelinayso kaabis CDP choline dheeri ah, waxaa jira laba arrimood oo muhiim ah oo laga fiirsado inta badan kuwa kale. Kow; hubi inaad alaabtaada ka helayso soo saaraha wax lagu kabo ee lagu kalsoon yahay iyo laba; maskaxda ku hay in nolosha nuska ah ee budada cayriin ee CDP choline ay ku dhowdahay saacadaha 60-taas oo macnaheedu yahay qiyaasta maalinlaha ah inay noqon karto mid aad u badan. Kaabidani waa mid ku habboon inta lagu jiro xilliyada aad dareento inaadan fursad u helin helitaanka cuntada ku habboon, ama aad isticmaaleyso isku-darka acetylcholine-ka sida Racetams. Noocyada noocan ah ee 'Nootropic xeryahooda' waxay si dhakhso leh ugu guban karaan jidhkaaga sida dabiiciga ah ee choline loo yaqaan, taas oo laga yaabo inay ku keento madax xanuun iyo noocyo kale oo raaxo darro maskaxeed iyo jidheed Budada CDP choline waxaa badanaa loo iibiyaa sidii caanaha loo yaqaan 'Cognizin formula' ee ay soo saartay Kyowa 5. Tani waa qaabka Cytidine 5-Di Phosphate Choline ee xarunta oo lagu soo saaro iyada oo loo marayo habka loo yaqaan 'Kyowa patent process'. Cuntada dheeriga ah ee ka kooban dhismahan ayaa ah mid tayo sare leh, maadaama soo-saarista iyo soo-saarista walxaha si adag loo xakameeyo.
11. Sida loo iibsado Daawada budada ee CDP Powder Online?
Markaad go'aansato inaad isticmaasho budada caanaha ah ee CDP-ta ah ee dheeriga ah, oo ah mid ka mid ah su'aalaha ugu horeeya si aad uga jawaabto nooca qaab-dhismeedku u shaqeyn doono adiga kugu habboon.
Daawada budada ah ee CDP waxay ku jirtaa qaabka budada ah, kiniin ahaan iyo xitaa sida duritaanka dareeraha. Sidoo kale habka gaarsiinta waa arrin doorbid shakhsiyeed, waxaa jira waxyaabo ujeedo ujeedo oo kugu dhiirigelin kara inaad go'aansato hal hab ama mid kale.
Marka ugu horeysa, budada budada ee CDP ayaa loo arkay in ay yeeshaan saameyn deg deg ah maxaa yeelay waxaa si dhakhso ah u nuugi karaa dhiigga. Nooca budada ah ayaa sidoo kale ka dhigaya mid aad u sahlan in la xakameeyo oo shakhsiyadeeyo qiyaasta daawadaada.
Tusaale ahaan, haddii aad haysatid dawooyinka CDP ee qoyan oo la yareeyo oo ah 500mg, waxaad u baahan doontaa inaad ku kordhiso xaddiga 500mg. Iyadoo budada, waxaa laga yaabaa inaad rabto in aad isticmaasho 250mg mar keliya, adoo ku qasaya biyo ama casiir.
Dabcan, kiniinnada ayaa ku guuleysta dagaalka kudhaca maadama aanad u baahnayn inaad cabirto qiyaastaada adoo qaadanaya qaadooyin ama miisaan qiyaas ah. Hase yeeshe, marwalba waxaad ka sameyn kartaa kiniinnada kiniinigaaga ee kiniiniga ka sameysan budada adoo isticmaalaya mishiinka fudud ee kiniinka.
Ugu dambeyntii farqiga ugu weyn ee udhexeeya labadaas waa qiimaha: budada qashinka CDP waa ilaa waqtiyada 5 raqiis ka badan yahay doorashooyinka kiniinka magaca brandka.
12. Su'aalaha ku saabsan Daawada budada ee CDP Powder
★ Sidee buu udub dhexaad u yahay bacriminta CDP? budo sheegasho?
· Qaaciddada cilmiyeysan ee ku saleysan cilmiga
· Sheybaar laga baaray nadiif ahaanta ugu badan
· Waxaa laga sameeyay uun maaddooyinka ugu fiican oo keliya
Ku kalsoon tahay oo ay kugula taliyaan bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka
★ Waa maxay macmudka CDP ee qoyaanka ah budo Faa'iidooyinka?
· Budada cayriin ee CDP choline waa qayb soo martay cilmi baaris balaaran
· Kaabista waxaa laga iibsan karaa bogga rasmiga ah ee soo saaraha
· Waxaa sameysay shirkad sumcad wanaagsan leh
★ Maxay tahay saameynta daawada ee CDP choline?
Soo-saaruhu wuxuu xusayaa qaar ka mid ah dhibaatooyinka soo raaca ee cunista budada cayriin ee 'CDP choline' oo xad dhaaf ah Waxay ku taxeen boggooda internetka in ay sababi karto murugo xad dhaaf ah, taas oo la xiriirta madax xanuun, qoor adag, iyo calool xanuun Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa laga yaabaa inay ku soo baxaan ur kalluun ah sababtoo ah hoos u dhigista budada CDP choline ee mindhicirada.
★ Intee in le'eg ayay qaadanaysaa si ay u muujiso natiijada?
Badeecada soo saartey ma sheegin inta ay qaadanayso baaritaanka Vitamin Research CDP pine-ka si ay u muujiso natiijooyinka.
★ Xaggee laga iibsadaa budada qashinka CDP? budo iyo qiimaha?
－Si aad noolala soo xiriirto nidaamka baaritaanka e-maylkeena, ama wakiilka adeegga macaamiisha skype (CSR).
-oo na weydiiso su'aalahaaga (CAS: 987-78-0) tirada iyo cinwaanka.
-Maamulka CSR wuxuu ku siin doonaa qiimaha, qiimaha bixinta, nambarka raadinta, siyaabaha gudbinta iyo taariikhda imaanshada (ETA).
-Ku bixinta iyo alaabta la soo diri doono saacadaha 12 (Si loo dalbado 10kg).
-Kulgarrada la helay iyo dhiibo faallooyin.
Tags: iibso CDP Choline Powder, Budada CDP Choline
Ku iibso Drug Sponge Sunifiram online Wax kasta oo aad ubaahan tahay inaad ogaatid ka hor inta aadan iibsanin LGD-2226 budada